I-Springmead Bed & Breakfast - I-Airbnb
I-Springmead Bed & Breakfast
Rydal, New South Wales, i-Australia
Ikamelo e-i-bed and breakfast ibungazwe ngu-Marjory
U-Marjory Ungumbungazi ovelele
Ukukhansela kwamahhala ngaphambi komhla ka-Mas 21.
Jabulela ukuba wedwa okuthulile nokubukwa okuhle konke okutholakala kalula e-Lithgow, e-Oberon, e-Bathurst nase-Jenolan Caves. Itholakala ku-horse stud lena indawo yokujabulela izinyoni zasendle, inkungu ezigodini nokushona kwelanga okuhle noma mhlawumbe isidlo sakusihlwa sepikiniki.
I-Springmead inikeza ukubukwa okukhazimulayo kweBlue Mountains kanye nemibono yeLake Lyell. I-ambience ethule iphulwa kuphela umsindo wezinkukhu zethu kanye nezinyoni zasendle eziphonsa ihhashi elikhalayo ngezikhathi ezithile! Amakhangaru avame ukuvakashela idokodo eliphambi kwendlu futhi ama-wombat nawo angabonakala. Izinyoni eziningi ezihlanganisa ama-wrens, upholi kanye namaphela zihlala engadini nasezindaweni ezizungezile futhi umndeni wakwa-Kookaburra ohlala ngaphansi nje kwendlu. Indawo enhle yokuhlala nje uphumule noma usebenzise lokhu njengesisekelo sakho ukuhlola indawo ezungezile. Ibhulakufesi lezwekazi lifakiwe futhi isidlo sasekuseni esiphekiwe sitholakala ngemali encane.
Amapuleti kashizi newayini noma ubhiya ayatholakala ukuze athengwe futhi alungele ukuzijabulisa engadini yasegcekeni. Izidlo zakusihlwa nazo ziyatholakala futhi iziphazamisi zepikiniki zingahlinzekwa ngesaziso sangaphambili.
ubusuku obungu-7 e- Rydal
4.94 · 77 okushiwo abanye
Idolobhana lase-Rydal liqhele ngamakhilomitha angu-5 ukusuka kithi kanti indawo ye-Alexander pub inalo igumbi lokudlela. I-Rydal inabantu ababalelwa ku-130 ngakho incane kakhulu. ILithgow icishe ibe ngu-12km futhi inama-ATM, izindawo zokudlela, okuthathwa kuzo nezitolo ezinkulu. ILake Lyell iqhele ngamaminithi angu-5 ukusuka kithi futhi ilungele ukubhukuda, ukudoba, ukugibela izikebhe namaphiknikhi. Sinayo indawo yokupaka izikebhe nezinqola. I-Flat Rock iyindawo yepikiniki ebabazekayo eMfuleni iFish futhi iqhele ngemizuzu engama-20.
Siyabuhlonipha ubumfihlo bakho kodwa buzotholakala ukuze sikusize uhlele ukubona isayithi lakho kanye nokuqinisekisa ukuthi ukuhlala kwakho kuyajabulisa. Siyatholakala ukuze kuxoxwe futhi siyakujabulela ukuzwa mayelana nezinto ozizwisa ngohambo kanye nezinhlelo zakho. Okubaluleke kakhulu kithi ukuthi ujabulele ukuhlala kwakho.
Siyabuhlonipha ubumfihlo bakho kodwa buzotholakala ukuze sikusize uhlele ukubona isayithi lakho kanye nokuqinisekisa ukuthi ukuhlala kwakho kuyajabulisa. Siyatholakala ukuze kuxoxw…
UMarjory Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Rydal namaphethelo